Ogaden News Agency (ONA) – Kulankii Pan East Afrika oo ka dhacay magalada London iyo Aqqoonyahan badan oo kaso qeyb galay
Kulankii Pan East Afrika oo ka dhacay magalada London iyo Aqqoonyahan badan oo kaso qeyb galay
Posted by Dayr	/ December 19, 2011
Sawirada Shirkan Hoos ka Fiirso:
Shir aad loo soo aggaasimay oo Bulshada Geeska Afrika isugu yimaadeen ayaa ka dhacay magaalada London Maalinimadii Sabtida ee 17 December 2011.
Shirkan ayaa waxa lagu marti qaaday wariyaha Caanka ah ee Thomas Mountain oo ah wariyaha kaliya ee Geeska Afrika sida Xorta ah uga soo warama 10ki sanno ee u danbeysay.
Wariyahan oo ah sidoo kale nin u ololeeya xuquuqda dadka madow oo ku takhasusay dhaqamada iyo taariikhda Geeska Afrika ayaa shirkan kasoo jeediyay warbixino la xidhiidha khilaafaadka ka taagan geeska Afrika.
Wariye Thomas oo shirkan ka hadlaya ayyaa hadalkiisii ku bilaabay Dhibaatoyinka ka jira Geeska Afrika isaga oo barbar-dhigaya istiraatajaiyda weyn ee dhulkani u leeyahay Geeska Afrika waxa uuna yiri. Geeska Afrika waa xarun Istiraataji weyn u leh wadamada Ree Galbeedka madama oo dhulkaasi ku fadhiyo badda cas islamar ahaantaasna xeebtaas ay maraan dhamaanba ganacsiga ree galbeedku la leeyahay Asia. Haddaba si ree galbeedku u illaashadaan dantooda waxa ay wakiisheen dowlada Ethiopia inay u noqoto police u illaaliya danaha ree galbeedka taas waxa ay keentay ayuu yiri in Ethiopia dhibaatoyin badan ka geysato Geeska Afrika caalamkuna indhaha ka illaashado madama oo ay shaqo u hayyaan.
Hadalkiisii oo uu kufuray dhibaatoyinka ka jira dhulka Ogadeniya ayaa Thomas waxa uu warbixin ka bixiyay dheer Cunaqabateynta KT Zenawi uu kuso rogay dhulka Ogadeniya waqti ayuu yiri la ogyahay in Ogadeniya ka jirto abbaaro xooggan. Sidoo kale waxa arrintaas oo kale ay ka dhacday ayuu yiri dhulka Oromada. Dowlada Ethiopia waxay cunaqabatayn saartay Ogadeniya oo u diiday raashinka oo dhan dadkaas tabaleysan islamar ahaantaasna waxay hayadihi samafalka ka saartay Ogadeniya sida Red Cross. Waqtigaas Abbaaruhu kajireen Ogadeniya iyo Ethiopia Wadanka UK waxuu kaalmo bani aadanimo u fidiyay dowlada Ethiopia oo uu ugu deeqay lacag dhan 60 Million. Maalmo kadib Ra isal wasaaraha Ethiopia Males Zenawi waxa uu sheegay in 200 oo nooca taangiyada daggaalka uu kasoo gattay wadanka Ukrine isaaga oo ka bixiyay lacag gaadhaysa 100 million.
Haddaba haddii mucaawamadi aysan gaadhayn dadkii loogudeeqay. waxa u baahan in la isweydiyo 60ka million ee loogu deeqay xagey geysay dowlada Ethiopia. jawaabtu waxa weeye waxay ku gateen taangiyadaas iyo hubkale.
Wariye Thomas waxa kale oo uu ka hadlay daggaalkii ay dowlada Ethiopia ku qaaday koonfurta somaliya waxuuna sheegay in daggaalkaas tobonaan kun oo dhalinyaro somali ah in lagu dilay sidoo kale lagu bara kiciyay million shacab ah. Waxa uu ka hadlay in Wadamada ree galbeedku aysan daacad ka ahayn in somaliya hesho dowlad iyo nabad galyo midna. isaga oo ku eedeyay wadanka Mareykanka in sheekadoodu tahay qowda maqashi waxna ha u qaban.
Sidoo kale waxa uu ku dheeraday khilaafka u dhexeeya wadanka Eritrea iyo Ethiopia iyo sida wadamada Ree galbeedku ay u rabaan in lacuna qabateeyo waxayar ee ah 2% ee jaaliyaadka Eritrea-nku ku caawiyaan dhulkooda. Wadanka Eritrea waa wadan raba innuu isku fillaasho gaadho caalamkuna waxuu ku dadalaya ayuu yiri in la qariyo horumarka Eritrea oo la buun buuniyo caqabada Eritrea. Waxa Eritrea ay ku guulaysay ayuu yiri inay dabar jarto cudurka kaneecada oo ah dillaaga ugu weyn ee Afrika. Sidoo kale waxay 40% ay yareysay cudurka Aidska. Waxaas oo dhan caalamka looma sheego. Waxase caalamka loo sheega ayuu yiri dhalinyarada Eritrea oo ka qaxday Eritrea. Waa run ayuu yiri dhalinbadan oo ree Eritrea ah ayaa wadanka ka haajirtay lakiin waxay u haajireen waa arrin dhaqaale la xidhiidha. maahan mid la xidhiidha amniga. Wadanka Eritrea dhalinta ka haajirtay waxay noqonaysa 2% tirada guud ee dadka ree Eritrea. Waxase aan wada ognahay dadka Ethiopia ka qaxay ee arrin siyaasadeed ku qaxay ama amni inay tahay 10% tirada guud ee Ethiopia. Hadana ma arkeysaan cid ka hadlaysa qaxootiga Ethiopia, lakiin midka yar ee Eritrea ayaa caalamku arka.
Waxuu aad uga hadlay sababta ay wadamada Ree Galbeedku ugu hiilinayaan Ethiopia, oo dadyowga ku nool Geeska Afrika u xaqirayaan, waxuu aad ugu dheeraday dhibatada daggaal iyo kacdoonada ka socda Geeska afrika khaasatan Gudaha Ethiopia. Waxa jirta in dhulka Gambella dadkii deggaanka ahaa dhulkoodi laga baro kiciyay taas oo shacabka gambellaa ay ka dhiidhiyeen oo ay qoriga qaateen duurkana galleen. Waxa jirta in Qowmiyadii axmaarada loo diiday hilibki ay cunni jireen oo maanta ay aad u kacsanyihiin, xattaa tigrega dhexdisa canfarta oromada dhamaan qowmiyadaha ku hoos nool Ethiopia waa kaceen oo daggaal ayay kula jiraan taliska woyanaha ayuu yiri mudane Thomas.
shirkan oo muddo 5 saacadood ah socday ayaa waxa ka hadlay oo kale Hoggaanka Arrimaha Dibada ONLF mudane Maaday, iyo Aqoonyahan badan oo kasoo jeeda Somaliya oo ka xusi karo Dr Gure iyo Xildhibaan Dr Zakariye.
Waxa shirkaan oo ay kasoo qeyb galeen Haweenka Somalida Ogadeniya, Dhalinta OYSU UK, Dhalinta Somaliweyn, iyo Jaaliyadaha Oromada, Eritreanka iyo Qowmiyada Axmaarada lagu weydiiyay su’aalo badan Suxufigan oo ah nin leh jinsiyad cadaan balse lamid ah halagaamaga Geeska Afrika ee jinsiga madow.
Warbixintan oo filim ah dhowaan ayaad heli doontaan ama kala soco Barnaamijka Ilays;
waan salaamayaa shacabka reer ogaadeeniya oo dhan waxaan aad ugu faraxsanahay in ay garteen dantooda maanta iskuna tashadeen waxaan aad u tageeraa halganka ogaadeenuya lagu xoraynaayo hadii aanu nahay reer s s c taageero hiil iyo hooba ah ayaanu la garabtaganahay walaalahayo reer ogaadeeniya oo uu naga dhaxeeyo dhalasho iyo dhulba maalin aan fogeyna bi idnilaah waanu guulaysan waan salaamayaa maxamed dheere iyo zekariye xaajiba iyo maadeey aqoonta ha la isu geeyo guuuuuuuuuuuuuuuuul iyo gobanimo HAGAMAYA DHIIDHIYAHAYOOW HAL AAN KU DEEQSIIYO HABSAN MAALIMO YUU IMAAN KALA HADHWEEYEENE NHABAR IYO HABEENKEED NINKII HADHINA YEELKIISE .
markahore waxan salamayaa dhaman umada somaliyed inta dacada ah xasadna kujirin halganka xaqa ah na tagera sln kadib waxan umahadcelinaya walalahena ssc o laguyaqano karti aqon dagalyahanimo gumaysi necyb iyo tarikh sojiren ah sida ay halkanka re ogadenia ugarabtaganyin. Waxan umadena leyahay manta gul ayan taganahay marhadi halganki herkas marayo waxan leyahay wayane wujabaye hakadaline dabayaqada.